Shaqooyinkee loo arkaa inay lama huraan yihiin? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 17/11/2021 23:44 | Ka Bixitaanka Shaqada
Shaqooyinkee loo arkaa inay lama huraan yihiin? Dhammaan shaqooyinku waa muhiim, taasoo la micno ah in dhammaan xirfadlayaasha ay qabtaan shaqo qiimo leh. Shaqada gaarka ah ee shaqaale kasta waa qayb ka mid ah mashruuca kooxda ee shirkadda. Ganacsi kastaa wuxuu wax ka qabtaa daawadayaasha bartilmaameedka ah ee uu ku xidho ololihiisa suuqgeyneed. Si kastaba ha ahaatee, Inkasta oo dhammaan waaxuhu ay khuseeyaan, waxaa jira hawlo xitaa ka sii badan oo mudnaanta leh. Taasi waa, waa lama huraan sababtoo ah waxay la socdaan fayoobida bini'aadamka.
Muhiimadda ay leeyihiin hawlaha lagama maarmaanka ah waxay ka muuqdeen macnaha guud ee masiibada. Xaalada degdega ah sida ay u kala horeeyaan ayaa isbedela. Waa wakhtigaas marka hawlaha muhiimka ahi ay helaan muhiimad weyn. Waxa jira mashruucyo kale, dhinaca kale, kuwaas oo la hakin karo iyada oo aan si weyn loo beddelin hab-socodka dhabta ah.
1 Shaqooyinka ku xidhan warbaahinta
2 Shaqooyinka lagu qaabeeyey qaybta adeegyada aaska
3 Xirfadlayaasha caafimaadka
4 Xirfadlayaasha ka shaqeeya saadka
5 5. Xirfadlayaasha daryeelka dadka
Shaqooyinka ku xidhan warbaahinta
Raadinta macluumaadka ee akhristayaasha waxay kordhisaa muddada hubaal la'aanta. Sababtan awgeed, warbaahintu waxay qabataa hawl aad muhiim u ah oo ah isha tixraaceed ee bulshada. Waxay bixiyaan si dhammaystiran oo la hubiyay oo la diiwaangeliyay xogta hadda jirta.
Shaqooyinka lagu qaabeeyey qaybta adeegyada aaska
Noloshu waxay ku socotaa marxaladeeda xaalado adag. Geedi socodka murugada waxaa la kulmi karaa muddada sifooyinkan. Sagootinta qofka aad jeceshahay ee dhintay waa xaqiiqo soo saarta isbeddelka xilligan xaadirka ah kuwa kuugu dhow. Xirfadlayaasha ka shaqeeya adeegyada aaska ayaa bixiya shaqo muhiim ah bulshada dhexdeeda.
Sidaan horay uga faalloonnay, shaqooyinka muhiimka ah waa kuwa ku xira baahiyaha aasaasiga ah ee aadanaha. Sidan, haddii nooc kasta oo shil ahi dhaco, qofku wuxuu la xiriiri karaa adeegga uu u baahan yahay. Waa muhiim in la qiimeeyo daryeelka caafimaadka xilli kasta oo kalandarka. Bukaanku waxa laga yaabaa inay dareemaan xanuun kasta jiilaalka, dayrta, guga iyo xagaaga. Sidaa darteed, xirfadlayaasha caafimaadka waxay qabtaan shaqo xirfadeed.
Farmashiyeyaasha, tusaale ahaan, waxay kor u qaadaan horumarinta caafimaadka joogitaankooda xaafadaha. Waa goob kulan oo loogu talagalay deriska kuwaas oo ku yaal deegaanka u dhow. Farmashiistaha waa khabiir lagu kalsoon yahay ee qoysaska. Qof la taliya oo xaliya shakiyada suurtagalka ah.
Xirfadlayaasha ka shaqeeya saadka
Dukaanka cuntadu waxa uu bixiyaa dareen lama huraan ah, marka macaamiishu ay u safraan xarunta si ay u sameeyaan gaadhiga wax iibsiga. Alaabooyinka laga helay khaanadaha bakhaarka waxay raaceen hannaan hore oo suurtageliyay in dhammaan alaabtu ay si fiican ugu habaysan yihiin barta iibka. Xirfadlayaasha ka shaqeeya saadka waxay saameyn togan ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada.
5. Xirfadlayaasha daryeelka dadka
Waxaa jira xirfadlayaal fulinaya shaqo muhiim ah marka laga eego dhinaca daryeelka. Waxay siiyaan taageero iyo daryeel dadka kale. Tusaale ahaan, da'da hore waxay u horseedi kartaa baahida loo qabo taageero gaar ah si loo qabto hawlaha qaarkood guriga. Ka-qaybgalka xirfadlayaasha ka shaqeeya goobtan waxay saameyn togan ku leedahay tayada nolosha kuwa hela daryeelkan.
Waxa jira xirfadlayaal kale oo qabta hawlaha muhiimka ah ee bulshada maanta. Tusaale ahaan, shaqaalaha fuliya shaqo ku xiran difaaca amniga. Shaqooyinkee loo arkaa inay lama huraan yihiin? Kuwa, muddada xabsiga ku noolaa qaab dhismeedka masiibada, raacay qaafiyaddoodii caadiga ahayd si ay u kordhiyaan danta guud ee bulshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Ka Bixitaanka Shaqada » Shaqooyinkee loo arkaa inay lama huraan yihiin?